မေတ္တာရေ ဘယ်မှာခန်း နှမလေးလည်းလွမ်း…………………..
- padauk moe
နေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၃)
“ကျေးဇူးပြုကာ ကူညီပါ ………. ဟု´´
မင်္ဂလာ ပရဟိတ မိဘမဲ့ကျောင်း
ကုလားနှဲ့ကုန်ကူးဖို့ကူညီနေတဲ့ စစ်တပ်၊ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖျောက်ဖို့ကြံနေသော အမှုတစ်ခု သံတွဲတွင်ဖြစ်ပွား
- Soe Naunk
နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook
လမင်းရဲ့ဘေး ကြယ်စင်တေး …………
ကာရံ ပျောက်သော ဒီည
Page2of 878<</a>12345...102030...>»
Comments By Postအဟံ ပထမံ - ဦးကြောင်ကြီး - kyeemiteအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - kyeemite - padonmarရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ဦးကြောင်ကြီး - TNAဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - ကထူးဆန်းအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - ဦးကြောင်ကြီး - အလင်း ဆက်သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kyeemite - အလင်း ဆက်လူပါး ပုလင်းထိ - အောင်ကြူး - Ma MaPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - အောင်ကြူး - ဦးဦးပါလေရာအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - N@ng Ghi Ghi Joe Zမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - padonmarနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - amatmin - parlayar 46ယုံလား? - ဦးဦးပါလေရာ - အလင်း ဆက်ကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - Ko chogyi - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - အလင်း ဆက် - Ma Maကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawမင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moeနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77823 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58413 Kyats )MaMa (57761 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...